XOG & XUUS Q= 3-AAD: Waa Kuwee Shanta Halyay Ee Kubbada Cagta Soo Maray Ee Rekoodhayaal Ku Lumiyay Koobka Aduunku? Akhriso Xogta Oo Dhan. - GOOL24.NET
XOG & XUUS Q= 3-AAD: Waa Kuwee Shanta Halyay Ee Kubbada Cagta Soo Maray Ee Rekoodhayaal Ku Lumiyay Koobka Aduunku? Akhriso Xogta Oo Dhan.
November 19, 2018 Mahamoud Batalaale
Waa markale iyo barnaamijkii aanu ugu magaca darnay “Xog iyo xusuus” waana qaybtii saddexaad iyada oo aanu hore idiinku balan qaadnay in waqtiga lagu jiro fasaxa kulamada caalamiga ah in aanu idiin soo gudbin doono waxyaabo taariikhda kubbada cagta xog iyo xusuus u ah waxaana jiray laba qaybood oo faah faahsan oo aanu hore idiinku soo gudbinay iyada oo haddii aanad hore u akhrisan aanu dhamaadka warbixintan iidiin soo dhigi doono.
Aan ku sii socono qormadeena hadda, waxaa kubbada cagta soo maray ciyaartoy taariikh badan soo sameeyay isla markaana sumcad wayn ku soo yeeshay kubbada cagta balse waxaa soo maray waqtiyo ayna abid ilaawi doonin waxaana ka mid ah qasaarinta rekoodhe ee kulan koobka aduunka ah oo ay ku jiraan kulamo final ahi.
Waxaanu halkan idiinku haynaa shan ciyaartoy oo lagu tilmaami karo halyayo kubbada cagta soo maray kuwaas oo darbooyin gool ku laad ah ku lumiyay koobka aduunka iyada oo mid kastaba aanu bog khaas ah ku soo bandhigi doono.
Haddaba halkan kaga bogo xogta iyo xusuusta shantan halyay ee rekoodhayaasha ku soo lumiyay kulamo koobka aduunka ah iyo qaabkii wax u dhaceen oo faah faahsan.
5. Steven Gerrard, England vs Portugal, 2006 World Cup
Xulka qaranka England ayaa taariikh xun ku soo lahaa rekoodhayaal tuurista tartamada caalamiga ah waxayna markale galaafaday Three Lions intii lagu jiray kulankii koobka aduunka ee sanadkii 2006 kii markaas oo guuldaro rekoodhayaal ah kala kulmeen Portugal.
Steven Gerrard waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii khibrada layaabka lahayd u lahaa rekoodhe tuurista wuxuuna qaatay mid ka mid ah rekoodhayaashii xulka qarankiisa England ee afar dhamaadkii koobka aduunka ee 2006 kii iyada oo aanu jirin qof ka shakisanaa in Steven Gerrard uu rekoodhahan lumin doono.
Steven Gerrard oo waqtigaas ahaa xidigihii dahabiga ahaa ee Liverpool iyo xulka qaranka England isla markaana si sahlan u soo dhaliyay rekoodhayaashii finaladii FA Cupka iyo Champions league ayaa si lama filaan ah u qasaariyay rekoodhihii xulkiisa ee kulankii Portugal.
Xulka qaranka Portugal ayaa 3-1 rekoodhayaal ah ku garaacay England laakiin xusuusta kulankan ayaa ah in Steven Gerrard oo khabiir ku ahaa rekoodhe tuuristu uu lumiiyay darbadiisa wuxuuna ka mid noqday shanta halyay ee lagu xusay taariikhda madaw ee rekoodhe tuurista koobka aduunka.
4. Hugo Sanchez, Mexico vs Paraguay 1986 World Cup
Halayaygii hore ee kooxda Real Madrid iyo xuka qaranka Mexico ee Hugo Sanchez ayaa sanadkii 19986 kii waxaa loo tixgalinayay in uu ahaa gool dhaliyihii abid ugu fiicnaa ee taariikhda kubbada cagta soo maray laakiin waxa uu waqtigan ku biiray liiska halyayada rekoodhayaasha ku lumiyay koobka aduunka.
Hugo Sanchez oo taariikh layaableh ka soo dhigay Mexico iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qarankiisa Mexico u tuuray rekoodhayaashii koobka aduunka ee sanadkii 1986 kii kulan ay la ciyaarayeen Paraguay iyada oo goolhayihii waqtigaas ee Paraguay ee Roberto Fernandez uu joojiyay darbadii uu Hugo Sanchez tuuray.
Kadib waxaa ciwaanada kubbada cagta qabsaday rekoodhihii uu qasaariyay Hugo Sanchez maadaama oo uu markaas ahaa mid loo tixgalinayay gool dhaliyihii taariikhda kubbada cagta ugu fiicnaa.
Bogga 2-aad ilaa Bogga 4-aad Xogta Ka Sii Akhriso.